​के यो सतिले सरापेकै देश हो ? श्रीखण्ड जस्तो मुलुक किन बन्दैछ खुर्पाको बिड ?
Monday,5Oct, 2015 11:03 AM
भीमसेन थापालाई अनेक जालझेल गरेर मर्न बाध्य बनाइएपछि उनीसँगै सति जाँदा उनकी श्रीमतीले नेपाललाई सरापेको इतिहाँसमा पढ्न पाइन्छ । देशभक्त थापालाई मार्दा यो देशमा राम्रा मान्छेको कहिल्यै भलो नहुने भन्दै सरापेको इतिहाँस पढ्दा र आज हाम्रो देश नेपालको अवस्था हेर्दा लाग्छ के यो सतिले सरापेकै देश हो ?
मुलुकको अवस्थाबारे चित्रण गर्न धेरै अगाडी जानु पर्दैन, २००७ सालदेखि हालसम्मका घटना, परिघटना र वास्तविक अवस्थाको मूल्यांकन गरे काफि हुन्छ, आज मुलुक नामको सार्वभौम र व्यवहारमा उपनिवेश जस्तो किन बनिरहेको छ भन्ने कुरा ।
राजनीति संक्रमण नेपालको पर्यावाची
नेपाल जहिलेपनि राजनीतिक संक्रमणको भुमरीमा परिरहेको छ । कुनै यस्तो समय नहोला नेपालमा राजनीतिक संक्रमण हटेर मुलुकको समग्र विकासमा लागेको । यति इतिहाँसमा त्यस्तो भएको हुन्थ्यो त मुलुकले अहिले यो हविगती किन बेहार्नु पथ्र्यो र ? नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन २००७ साल अघि देखिनै संघर्ष चलिरहेको थियो । अहिले आफुलाई सबैभन्दा प्रजातान्त्रीक शक्ति दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रका लागि लड्यो । लामो संघर्षपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र आएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ र मुलुक विकासको गतिमा लम्कन्छ भन्ने धेरैको आशा थियो । तर जनताको त्यो आशा धेरै टिक्न पाएन । फेरी मुलुकमा प्रजातन्त्रको हरण भयो । त्यसपछि मुलुक प्रजातन्त्र पुनस्थापनाका लागि होमियो । २०१७ सालसम्म राजनीतिक संक्रमणमै गुज्रियो । कहिले एकदलिय शासन त बहुदलीय शासन, राजा र दलका बिचमा अन्तरसंघर्ष, पञ्चायतको पक्ष विपक्षको लडाइ, जनमत संग्रह, धाँदली आदीजस्ता कुरामा मुलुक अल्झिनै रह्यो । यी सबै घटना जनताका नाममा भएका थिए र दुःख पाइरहेका थिए तीनै जनताले ।
कम्युनिष्टको उदय, कांगे्रस कम्युनिष्टको अन्तरसंघर्ष र एकले अर्कालाई खुइलाउने राजनीति, राजा, प्रजा बिचको अन्तर जस्ता कुरामा रुमलिंदा मुलुकले विकासको मुख देख्न पाएन । लामो रस्साकस्सीपछि २०४६ सालमा बहुदल आयो । अनि प्रजातन्त्रको उच्चरुप आएको मानियो । २०४७ सालमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो । लाग्थ्यो त्यतिबेला पनि मुलुकमा अब राजनीतिक संक्रमण हट्यो, अब मुलुकले विकासको गति लिन्छ । २०४६ पछि मुलुकले केहि गति लिएकै हो तर अपेक्षाकृत थिएन । कांगे्रस एमाले एक अर्कालाई खुइल्याउने खेलमै थिए, पानीबाराबारको अवस्था थियो । ति बाहेक त्यो व्यवस्थामा असन्तुष्ट मसाल केही फुटेका व्यक्तिहरु मिलेर २०५२ सालमा माओवादीका रुपमा उदय भयो र उसले सशस्त्र युद्धको सुरु गर्यो ।
२०५८ सालसम्म आइपुग्दा माओवादी युद्ध उत्कर्षमा थियो । त्यहि समयमा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । अनि मुलुक झनै जटिल मोडमा फस्यो । राजाका रुपमा ज्ञानेन्द्र आए । २०५८ सालपछि एकातिर ज्ञानेन्द्र राजाका रुपमा उन्मातिदै गएभने माओवादी युद्ध झनै फैलंदै गए । यो सबै युद्ध र राजनीतिक संक्रमणको पिडा भोग्ने यीनै नेपाली नै थिए । कांगेस, एमाले र माओवादी, अनि ज्ञानेन्द्र सबैका कदम जनताकै नाममा चालिएका थिए । अनेक आरोह अवरोहका बिचमा ज्ञानेन्द्रको ९ रेक्टरको लात खाएका कांग्रेस एमाले सहितको सातदल र युद्धबाट थाकेको अनि सेफल्याण्डिङ खोजेको माओवादीका बिचमा १२ बुँदे सहमति भयो र मुलुकमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन भयो । त्यसको फलस्वरुप गणतन्त्र आयो ।
गणतन्त्र आएपछि अब दलहरु मिलेर संविधान बनाउलान् र मुलुक विकासको गतिमा अगाडी बढ्ला भन्ने आम नेपालीको आशामा फेरी तुसारापात भयो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान आएन, मुलुकमा झनै जटिलता आयो । बन्द हड्ताल झनै बढे, उर्जा संकट झनै चरम भयो । भ्रष्ट्राचार झनै मौलायो । कांगे्रस एमालेको भाग खान माओवादी आयो तर जनताले केही पाएन् । पहिलो संविधानसभा विघटन भयो, दोस्रो संविधान सभाको निर्बाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्बाचनपछि मुलुकले बल्लतल्ल संविधान त पायो । तर राजनीतिक संक्रमण हटेर मुलुक आर्थिक विकासमा लंकिएला भन्ने जनताको आशा थियो र छ पनि । तर संविधान जारी भइसकेपछि मधेशमा बलेको आगो, संविधानमा असन्तुष्टहरुको चर्को आवाज, छिमेकी मुलुकको नाकाबन्दीले तड्पाएको जनजीवन । यी जतिपनि घटना परिघटना भए यीनमा मारिने, मुछिने र धोका पाउने यीनै गरिखाने नेपाली हुन् । जहाँं हरेक पुस्ताले धोका बाहेक केही पाएको छैन ।
मुलुकको वास्तविक अवस्था
नेपालको इतिहाँंस हेर्नेहो भने गर्व गर्न लायक छ विश्वमै । कसैको उपनिवेश नबनेको, वीरहरुले जोगाएको देश, सार्वभौम सम्पन्न देश, सगरमाथाको देश, बुद्धको देश भन्दा अतिनै गर्वगर्न लायक छ । र हामीले गरिरहेका नै छौं । तर वर्तमान अवस्था हेर्दा हरेक कुरा लाजमर्दो अवस्थामा छन् । रेमिट्यान्स्मा धानिएको देश, आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश, गरिब देश, विकासोन्मुख देश, कुनै मुलुकले दुईदिन नाकाबन्दी लगाइदिएमा विकल्प खोज्न नसक्ने देश, सत्ता र स्वार्थका लागि अस्मिता बेच्न र मुलुकको स्वाभिमान देखाउन नसक्नेहरुको देश आदि इत्यादि ।
न्यून आर्थिक वृद्धि
नेपाल दुई विशाल देशहरुका बिचमा रहेको सानो देश । दुई छिमेकी मुलुकले तिब्र गतिको आर्थिक विकास गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत नाघेका रेकर्ड कमै छन् । अझ मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि त त्यो अवसर कहिल्यै आएन । जहिले राजनीतिक संक्रमण, त्यहि संक्रमणमा खेल्ने देशको कर्मचारीतन्त्र र त्यसैको लडाइमा पिल्सने,तर खेल्न सकेको खण्डमा कमाउधन्दामा लाग्ने नीजि क्षेत्र । यीनीहरुका कारण मुलुक आज बर्बादिको अवस्थामा पुगेको छ । ३ देखि साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा रुमलिएको मुलुकको अवस्था झनै जटिल बन्दै छ । अहिलेपनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउने नारा लगाउने तर काम गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
नेपाल इतिहांसमा आत्मनिर्भर देश हो । २०४५÷०४६ सालसम्म धान चामल भारतमा निर्यात् हुन्थ्यो । तर अहिले हामीले वर्षमा करिब ३० अर्बको चामल भारतबाट आयात गर्छौं । नेपालमा जलविद्युत्को प्रशस्त संभावना छ, तर हामी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दैनौ, चर्को लोडसेडिङ बेहोरिरहेका छौं । लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट बिद्युत् आयात गर्छौं । यदि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिएको भए न आज इन्धनमा भारतसँंग यतिसारो भर पर्नुपर्ने थियो, नत मुलुकको यो हवगित नै हुने थियो । इन्धनको परनिर्भरता कम हुन्थ्यो र मुलुक संंवृद्ध हुन्थ्यो भने इन्धनका विकल्प नेपालमै खोज्न सकिन्थ्यो । नेपालमा पनि प्रमाणित पेट्रोल निकाल्न सकिने ठाउं छ, हामीले त्यतातिर ध्यान दिएनौ भारतबाट किनेर ल्याउनुलाई बहादुरी ठान्यौ । जसको परिणती आज भोगिएको छ ।
प्रशस्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो भने ग्यांसको ठाउंमा बिजुलीले काम गथ्र्यौ, विद्युत्ले गाडी कुदाउँथ्यो । बिद्युत् बेचेर धनी भएको भए स्वदेशमै इन्धन निकाल्न सकिन्थ्यो । तर बिडम्बना अब यी कुरा काल्पनिक जस्ता बनिरहेका छन् । नुन देखि औषधी सबै आयात गर्नुपरिरहेका छ । बरु नेपालमा भएका उद्योग पनि धमाधम बन्द भएका छन् र विदेशी वस्तुले नेपाली बजारमा डेरा जमाइरहेका छन् । हेटौडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज, जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता उद्योग बन्द भए, बेरोजगारी बढ्यो र ती सामाग्री आयात भए । आफ्नो देशको कपडा उद्योग, धागो कारखाना बन्द गरेर विदेशबाट आयात गर्ने हामी खोक्रो राष्ट्रवादका नारा लगाइरहेका छौं ।
बढ्दो बेरोजगारी र युवा पलायन
मुलुक अहिले जसरी धानिएको छ, त्यो यहांको प्रगती र काम गराइले कदापी होइन । ४० लाख हाम्रा युवाहरु विदशेमा गएर पसिनासंँग पैसा साटिरहेका छन् र त्यहि रेमिट्यान्स्ले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर दीर्घकालिन रुपमा रेमिट्यान्स्ले मुलुकलाई संवृद्ध कदापी बनाउंदैन । बरु विदशेमा गएर श्रम गरेका युवाहरु भोलिका दिनमा वृद्ध र रोगी हुन्छन्, तीनै युवालाई राज्यले उपचार गर्नुपर्छ । यसो भन्दा तितो लाग्छ, तर यो सत्य हो । क्षणिक फाइदा भएपनि मुलुकलाई संवृद्ध बनाउने युवा जोश जांगर मुलुकमै लागाउनुपर्छ । तर त्यो हुन सकेको छैन ।
सार्वभौम भित्रको उपनिवेशता
हाम्रो देश सार्वभौम मुलुक हो, यो कुरामा न हिजो विवाद थियो, न आज छ । तर, व्यवहारमा हामीले नै औपनिवेश जस्तो देखाइरहेका छौं । विशेषत छिमेकी मुलुक भारतले हामीलाई हेर्ने दृष्टीकोण र उसलाई हामीले दिएको स्पेस । यदी हमी आत्मनिर्भर हुन्थ्यौ र दील्लीलाई शक्ति केन्द्र मान्ने थिएनौ भने न भारतले नेपालमा आफ्ना यसमेन बनाउथ्यो र बनाउन खोज्थ्यो, नत भारतसंग झुकेर नतमस्तक बन्थ्यौँ । हामीले स्वाभिमान र राष्ट्रियताका कुरा गर्न आफ्नो स्वार्थपूर्ती भएन भनि नाकाबन्दी गर्दा पनि अहिलेपनि उसैको गुलामी गर्न पछि पर्दैनथो। जुन कुरा अहिलेको सरकारले नांगो नाच देखाइरहेको छ । नाकाबन्दीका कारण मुलुकनै ठप्प हुँदा हामी भारतको विकल्प खोज्दैनौ ।
बरु उल्टै भारतलाई खेल्ने मौका दिएका छौ । आफ्नो कुटनीतिक क्षमतामा असफल अहिलेको कोइराला सरकार न भारतसंगको समस्या मिलाउन सकेको छ नत विकल्प खोज्न नै । बरु यसमेन बन्न तयार भइ सरकार लम्ब्याउने र नमस्कार गरेर पाउ पर्न खोजिरहेको छ । भारत यतिसम्म हावी हुनुमा भारतको कारण होइन हाम्रै दलहरु जिम्मेवार हुन् । उसको यसमेन बेर आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्णय गराउन दील्ली धाउने प्रवृतिका कारण भारत यतिसम्म खेल्ने मौका पाएको हो । अहिले केही अडान लिएजस्तो देखिएपनि भित्रभित्र दलहरुले भारत र आफुलाई सेफल्याण्ड गराएर चाकडी गर्ने ध्याउन्नमा छन, बाहिर जतिनै राष्ट्रवादका करा गरेपनि ।
मधेश आन्दोलन र यसको समाधान
संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँंदै मधेशमा आन्दोलन चर्किएको छ । उनीहरुका जायज मागहरु सरकारले पुरा गर्नैपर्छ । तर मधेशवादी दलहरुले एउटा कुराको हेक्का के राख्नुपर्छ भने मधेश किन पछि पर्यो भन्ने कुरा । आज सबैभन्दा बढि अशिक्षा मधेशमै छ । सडक सञ्जालको नजिक भएर पनि गरिबी उस्तै छ, छुवाछुत जस्ता कुरीति मधेशमै बढि छ । मधेशवादी दलहरुले यी समस्या समाधानमा कहिल्यै भुमिका खेलेनन् । अहिले मधेशवादी दलका नेतृत्व हेर्दा अधिकांश जमिनदार र धनाड्य छन् । तर तीनका जनता पछि परिहेका छन् । नेताहरु धनी हुनुको विरोध होइन, तर जनताका माग संबोधन गर्नुपर्छ । सत्तामा भएका बेलामा मधेसी जनताका माग कहिल्यै नउठाउने र सम्बोधन नगर्ने यीनै दलहरु हुन्, तर अहिले जनतालाई नै ५० लाखको अफर सञ्चालन गरि जनता मारिरहेका छन् । अब मधेशवादीदलहरु वार्तामा आउनै पर्छ र सरकराले पुरा गरेका मागमा चित्त बुझाउनै पर्छ । सरकारले पनि जायज माग पुरा गर्नै पर्छ । तर नेपालमा राजनीति गरेर भारतलाई गुहार्ने, नाकाबन्दी लगाउने, आपसी सद्भाग भड्काउने, भारतलाई आफ्नो काकाबुवा मानेर दुई देशको सम्बन्धमै असर पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा उनीहरुले राजनीति गर्ने नेपालमै हो । बरु अहिले वार्ताबाट समाधान निकाली मधेशी जनतामा आफ्नो विश्वास बढाएर धेरै मत ल्याइ सत्तामा आएर मधेसी जनताका पिडा संबोधन गर्नुपर्छ । सत्तामा भएका बेला मधेशको म उच्चारण नगर्ने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुदा ५० लाखको अफर संचालन गरि जनता मार्ने कदम अत्यन्त गलत छ ।
के राजनीतिक संक्रमण हट्छ ?
नेपाल र राजनीतिक संक्रमण पर्याबाची नै बनिसकेका छन् । इतिहाँसमा पटक पटक धोका खांदै पिल्संदै आइरहेका जनता संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि फेरी पिल्सीनै रहेका छन् । संविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थिक विकासमा लम्कला भनेको तराइमा आगो दन्कीएको छ, जुन सजिलै निभ्ने देखिंदैन । अर्कातिर संविधानसभाको विरोध गर्ने विप्लप, बैद्यको घुर्की आइरहेको छ । त्यसमाथि आफैले जारी गरेको संविधानलाई अपुरो भन्दै पुरानो पार्टी छाडेर नयां शक्ति उदाउने दाउमा लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई । यी सबै हेर्दा अब पनि मुलुकमा तत्काल राजनीतिक स्थिरता आउने संकेत देखिएको छैन । तर अब अति भयो, मुलुक बर्बादीको अन्तिम विन्दुमा छ । अब मुलुकले थेग्न सक्दैन । तसर्थ तराईको आगो निभाउनै पर्छ । र बाबुराम भट्टराइले भनेजस्तो नयां शक्ति आएपनि त्यो विगतमा जस्तो आफ्ना माग पुर्याउन बन्द हड्ताल गर्ने, बन्दुक उठाउने होइनकी आर्थिक मुद्धा उठाएर मुलुकलाई संवृद्ध बनाउने खालको हुनुपर्छ । यता अन्यदलहरु पनि अब जैठारी खेल्ने होइनकी आपसमा एकता गर्दे आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ । अब दलहरुको प्रतिशपर्धा भनेको आर्थिक विकासका लागि हुनुपर्छ, जबकी विगतमा जस्तो शासन सत्ता पल्टाउने र उल्टाउने होइन ।
यसरी समस्या समाधान गरेर मुलुलाई निकास दिनुपर्छ र तिब्र गतिको आर्थिक वृद्धिमा लाग्नै पर्छ । अबका केही वर्षमा मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा लानै पर्छ । भूकम्पले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई जिवन्त दिनुपर्छ । र कति घण्टा काम गरे जनताको आर्थिक स्थिती बलियो हुन्छ, त्यो विधी हुनै पर्छ । जनताले कति घण्टा काम गरे खान पुग्छ, र कति मेहेनत गरे उ संवृद्ध हुन्छ ? जनताको दैनिकी फेरिनै पर्छ । किनकी जनता संवृद्ध नभएसम्म मुलुक संवृद्ध कदापी हुनै सक्दैन । र मुलुक सतिले सरापेको होइन, संवृद्धको नमुना पेश गर्ने विश्वको सार्वभौम सम्पन र राष्ट्रिय एकताको देश, शान्तिको देश भनेर उदाहरण पेश गर्नुपर्छ । यसैमा नै नेपाल र नेपालीको हीत छ । अन्यथा हाम्रो पुस्ताले पनि धोका पाउने हो भने भविष्यले हामीलाई धिक्कार्ने र हाम्रा सन्तती पनि भन्न बाध्य हुनेछन् शतिले सरापेको देश भनेर
जय देश,जय जनता